John Stones oo ka dhaawacmay kooxda Manchester City & Mudada uu garoomada ka maqnaanayo oo la shaaciyey – Gool FM
(Manchester) 17 Sebt 2019. Daafaca Kooxda Manchester City ee John Stones ayaa garoommada ka maqnaan doona illaa shan isbuuc kaddib dhaawac muruqa ka soo gaaray sida uu xaqiijiyey macallin Pep Guardiola.
Daafaca dhexe ee reer England ayaa ku dhaawacmay tababarka maanta ka hor kulanka furitaanka Champions League ee ay la ciyaarayaan Shakhtar Donetsk habeen dambe.
Stones ayaa kaliya u soo laabtay Manchester City Sabtidii kaddib markii uu ka soo kabsaday dhibaato muruqa ah oo hore, iyadoo guuldarardii lama filaanka ahayd ee ka soo gaartay Norwich ay ahayd kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League tan iyo guushii furitaanka ee ay ka gaareen West Ham.
Pep Guardiola oo ka hadlayay dhibaatadiisa difaaceed ayaa Saxaafadda u sheegay: “Wuxuu John Stones innaga maqnaan doonaa afar, shan ama lix toddobaad, waxa uu ku dhaawacmay tababarka Saaka, waana dhibaato dhanka muruqa ah.”
Maqnaanshaha Stones ayaa sii kordhin doonta dhibaatooyinka daafaca ee tababaraha Man City, Pep Guardiola, iyadoo daafaca dhexe ee Faransiiska Aymeric Laporte ay macquul tahay inuu garoomada ka maqnaado illaa bisha Janaayo.
Tani ayaa ka dhigeysa Man City in kaliya ay heystaan hal daafac dhexe oo la aqoonsan waana suurogal in lagu soo bilaabo kulanka Arbacada ee ay la ciyaarayaan Shakhtar 18-sano jirka Eric Garcia, dhanka kale waxaa jira dooq kale oo muhiim ah kaasi oo ah khadka dhexe ee reer Brazil, Fernandinho oo difaaca la wadaagi kara Nicolas Otamendi.
Guardiola ayaa hadalkiisa raaciyay: “Aniga ahaan tababare ahaan waa caqabad aan caadi aheyn, laakiin waxaan aaminsanahay wax aysan dadku ka aqoonin – niyad iyo dadaal, waxaan sameyn doonaa tallaabooyin aan horay ugu xallinayno dhibaatadan.”
Jamie Carragher iyo Gary Neville ayaa dood ka keenay hab dhaqanka daafaca dhexe ee Man City ee Nicolas Otamendi iyo Stones iyo sababta ay kooxda Pep uga gacan siin doonaan hanashada Premier League markii saddexaad oo xiriir ah.
Stones wuxuu kala garab ciyaaray Otamendi daafaca dhexe kulankii Norwich, labadan nin inta badan bannaanka ayey taagnaayeen, iyadoo gooldhaliyeyaasha Canaries ay dhaliyeen saddex gool, laakiin Guardiola ayaa taageeray daafacyadiisa isaga oo yiri;.
“Waxaan ixtiraam badan u hayaa waxa ay sameeyeen John iyo Nico, kubadda cagta kama hadleyso sida aad ula dhaqmeyso xaaladda fiican, laakiin waa sida aad ula dhaqanto xaaladaha xun xun.”
Si kastaba ha ahaate, kooxda kubadda cagta Man City ayaa la dalaa dhacaysa dhibaato wayn oo dhanka difaac ah, waxaana kooxda horay uga maqnaa difaacooda ugu muhiim sanaa ee Emric Laporte, sidoo kalena waxaa naadiga ka tagay halyeygooda Vicent Kompany oo dib ugu laabtay waddankiisa hooyo ee Belgium, waxaana ay taas muujineysaa xaaladda xun ee Naadiga Sky Blue.